Calaamadaha psn oo bilaash ah | Jilayaasha matxafka bilaashka ah | Kaararka PSn ee lacag la'aanta ah ee shaqeeya
Home // blog // Free code codadka
100% SHURUUDAHA CODSIGA CODSIGA LACAG LA'AAN AH
Ma jeclaan lahayd qabow haddii aad heli karto waxyaabo bilaash ah? Weligaa miyuu fekerayay in uu wax ku guuleysto adigoo riixaya bareha kaliya? Inta badan dadka ka baxsan waxaa hadda xaq u leh in ay kaararka amaahda bilaashka ah ama khadka internetka ee PSN-ka oo bilaash ah. Halkaan bilaash bixiyaha PSN code, natiijooyinka dhabta ah waa la damaanad qaadayaa!
NAGA QAABILSIGA SIYAASADDA:
Adeegga PSN waxaa bixiya SONY oo ku yaal warbaahinta saxaafadda. Dib ugu soo noqoshada November 2006, markii la sameeyay kaliya Sony PlayStation consoles, cidna ma ogaanin in ay heli lahayd caan ah baahsan. Dabadeedna, waxaa laga helaa ciyaartoydeena Blues, telefoonnada casriga ah iyo xitaa telefishanka HD. In kabadan 130 milyan dadka ayaa adeegsanaya adeegga PSN intaa ka dib oo tiradu sii kordhayso oo keliya. Si loo hagaajiyo waayo-aragnimada gambarashada waa sababta ugu weyn ee adeegsiga adeeggan iyo PSN waxay si toos ah u bartilmaameedsanaysaa suuqa dukaanka PlayStation.
Tilmaan-bixiyaha iyo caddaynta
Marka waa maxay codadka PSN?
Haddii aad tahay nooc ka mid ah akhristayaasha kuwaas oo mar hore u maray gigtadan si qalad ah, halkan waxaa ka muuqda mowduucda. Xeerarka PSN waxaa loo isticmaali karaa oo keliya isticmaalka garoonka PlayStation. (Wanaagsan, cad!). Waa code kaasoo ka kooban dhowr nooc oo kala duwan oo ah tiro iyo tiro kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu gaaro nooc ka mid ah abaalmarinta. Waxaad heli kartaa faa'iidooyinka xubinnimada illaa bil gudaheeda ilaa 12 bilood. Waxa aad si dhab ah u furan tahay waxaad ka heli kartaa ciyaaro bilaash ah iyo shabakada internetka ee PlayStation. Xeerka PSN waxaa la isticmaali karaa oo kaliya haddii aan horey loo isticmaalin. Qofka 1 oo keliya ayaa heli doona isticmaalka lambarka gaarka ah. Ka dib marka aad gasho xisaabta PlayStation, waxaad tagi kartaa qaybta dukaanka PlayStation oo aad koodkaaga ku qorto. Tani waxay geli doontaa bilaha ciyaaraha PlayStation iyadoo ku xiran qiimaha kaarkaaga PSN.
Waqtiga si aad u hesho qadar lacag la'aan ah!
Waxaa jira meelo badan oo halkaas ka baxsan oo sheeganaya inay bixiyaan lacag la'aan PSN oo shaqeyneysa ama haysato bilaash bixiyaha PSN code taas oo si dabiici ah u soo jiidaneysa in ay soo jiidato maskaxyada PlayStation. Inta badan, si kastaba ha ahaatee, ha ku dhegsanaan sheegashadoodii iyo dhammaadka wakhti qaali ah oo aad ku dhejisid ama aad ku rakibtid fayras xaasidnimo ah oo dhaawici kara nidaamkaaga. Natiijadu, waxaad ku dhammaataa lambarka PSN sidoo kale waxaad ku dhamaaneysaa waxyeelada kombiyuutarkaaga. Sidoo kale, waxqabadka kale ee dhibta ah ee aad u baahan tahay inaad buuxiso waxay noqon doontaa baaritaan aan dhammaad lahayn si aad u hesho codadka. Waqtiga ugu dambeeya dhammaadka baaritaanka, waxay ku dhamaanayaan inaad dhahdaan aadan u qalmin ama waxaad la kulmi doontaa cabsida ugu xun, MAYA CODSIGA!
Laakiin! Tani ma aha kiiskeena nala leh sida aad ugu qanacsan tahay farxadeena. Waxaan u hubineynaa khibrad buuxda oo buuxda iyo codsiyada PSN ee si buuxda loo shaqeyn karo oo aad ku iibsan kartid dukaanka PlayStation.
Maxaad u baahan tahay inaad adeegsato adeegeena? Aad u fudud:
Waqtigeena jiilkeena waa mid aad u yar marka la barbardhigo meelaha kale. Xeerarka degdega ah iyo kuwa nabadgelyada leh iyagoon wax lacag ah bixin. Xaq aan xaq ahayn?
Waxaa jira gebi ahaanba ma jirto si aad u soo dejiso si loo abuuro lacag la'aan PSN taas oo shaqeyneysa! Waxaan soo saarnaa codadka xafiisyadayada. Khibrada dhalida oo bilaash ah oo ammaan ah. Our servers ayaa si fiican loo dayactiray, sidaas darteed waxaan ku kalsoonahay soo saaro cajiib ah!
Adeegyadeenu had iyo jeer waa bilaash. Xeerarka cusub iyo kuwa cusub ayaa la heli karaa oo dhan si loo iibsado. Adeegyada yaryar waa inaan marnaba laga fileynin dhinaceena. Marnaba iskama qaadno tartiib tartiib ah. Waxaan u sameeynaa sida ugu dhakhsaha badan!
Waxaa jira fursado kala duwan oo lagu kala dooran karo. Meelaha kaararka ee kaararkeenu waxay ku yimaadaan noocyada 10 $, 20 $ iyo 50 $. Waxaad xor u tahay inaad doorato kaarka aad rabto oo dhanna waa adiga!
Si ka duwan goobaha kale ee been-abuurka ah oo ay si aan kala sooc lahayn u soo saaraan tiro nambar, waxaan iibsanaa kaararka PlayStation oo u qaybiyaan dadka aan jecelahay sida marka dakhliyadayadu ay xasilloon tahay.
Uma baahnid inaad ka welwelisid feejignaanta xun. Ma haysanno xayeysiin fariin ah xitaa inkastoo dakhliyadayadu ay gebi ahaanba ka soo baxayaan xayeysiiska oo keliya. Ma jiraan arrimo ku saabsan arrintan sidoo kale!
Adeegyadayada waxaa loo heli karaa ku dhowaad dhammaan dalal ciyaaro oo leh macluumaad wanaagsan oo xogta user ah. Sidaas darteed ciyaartoyda qaybaha kala duwan ee adduunka ayaa u baahan in laga walwalo taas. Dhammaan waa la daryeelay. J
WAA MAXAY WAA MAXAY WAA BUUXIYAA ?!
Si fudud u soco bilaash bixiyaha PSN code iyo guji on dhalin! Miyuu ka fududaan karaa tan? Wakhtiga sugitaanka wuxuu ka yar yahay xitaa 30. Waa wax iska caadi ah haddii aad ciyaartoyda ka shakisantahay. Gebi ahaanba la fahmi karo sababo badan oo ah boggaga internetka ee qarsoodiga ah. Sidaa darteed sababta aan u siin tallaalka lana arag naftaada?
Codsiyada PSN ee bilaashka ah WALBA Xawaare, Badbaadin, Amaan ah oo Amaan ah! Jilbayaashu waxay nagu arkayaan in ay soo rogayaan, waxay neceb yihiin!
41 Comments ON " Calaamadaha psn lacag la'aan ah "
aan ahayn Nofeembar 28, 2017 at 7: 50 pm - Reply
Weligay ma arkin wax sidan oo kale ah
Vengence Nofeembar 28, 2017 at 7: 52 pm - Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan oo shaqo fiican qabta
Tommy Bill Nofeembar 30, 2017 at 3: 38 pm - Reply
WAA MAXAY GOD. WAAD KU TAHAY A TONS!
Woody December 1, 2017 at 6: 34 AM - Reply
ay u shaqayso
Hal koorso December 3, 2017 at 9: 27 AM - Reply
Ka shaqeynaya kaadhka deeqda ee 50 USD, u ogolow ...
Homulus December 8, 2017 at 2: 15 pm - Reply
BMWFan December 14, 2017 at 7: 30 AM - Reply
waxay heshay: p
Geedka kirismaska December 20, 2017 at 7: 15 pm - Reply
Emil December 23, 2017 at 10: 36 AM - Reply
U gaabinta geeddi-socodkani wuxuu qaadanayaa sidaa daraadeed
Emil December 23, 2017 at 10: 39 AM - Reply
laakiin waa u qalantay
Ramen Janaayo 3, 2018 at 7: 34 AM - Reply
qaadatay waqti yar, laakiin ugu danbeyntii way shaqeysay
Anthony Janaayo 9, 2018 at 10: 05 AM - Reply
Fred Janaayo 17, 2018 at 6: 24 AM - Reply
Ditch Janaayo 17, 2018 at 7: 35 AM - Reply
wuxuu u shaqeeyaa runtii wanaagga fiican!
King Artur Janaayo 22, 2018 at 6: 39 AM - Reply
Hamza Janaayo 27, 2018 at 2: 35 AM - Reply
ps4 username elitebro786 qof fadlan aniga ii samee.
xayawaanka Janaayo 28, 2018 at 10: 49 AM - Reply
waxay heshay xNUMX shaqooyinka codadka, ma heli karto wax kale oo maanta ah
zonne Febraayo 9, 2018 at 8: 23 AM - Reply
Ha ahaato qof caajis leh
Dumarka waxay tagaan jikada Febraayo 22, 2018 at 1: 28 pm - Reply
Wax kasta oo aad rabto, waad heshay, wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad heshay, wax kasta oo aad heshay
Sharci, fudud oo degdeg ah March 1, 2018 at 10: 35 AM - Reply
Sharci, fudud oo degdeg ah
isreebreeb Maarso 22, 2018 at 7: 07 pm - Reply
GOT ONE CODE WAXAA KA HELI KARO
Demilo Maarso 28, 2018 at 10: 57 pm - Reply
Foxy_foire March 29, 2018 at 9: 22 AM - Reply
OMG, OMFG: () () () () () (() ()
Terminator Abriil 12, 2018 at 6: 31 AM - Reply
La helay koodhkayga: 3
Tron Abriil 26, 2018 at 4: 57 pm - Reply
Calaamadaha 3 ee la abuuray maanta 😀 loooooooooooooolo
jimicsi May 3, 2018 at 5: 36 AM - Reply
Waxaad heshay codadkayaga psn
Bird May 17, 2018 at 7: 11 pm - Reply
Laga soo iibsaday qaar ka mid ah cayaaraha:>
Dude_pls May 24, 2018 at 1: 33 pm - Reply
Miyaad iga caawin kartaa anoo addoon ah? My skype waa terminator2001
tron May 31, 2018 at 1: 54 pm - Reply
Mahadnaq weyn (y)
asam Juun 20, 2018 at 8: 17 AM - Reply
Tjokyo July 5, 2018 at 10: 35 AM - Reply
wanaagsan, hadda waan ku faraxsanahay
Bontager July 22, 2018 at 11: 32 AM - Reply
Tan September 7, 2018 at 5: 22 AM - Reply
Dariyus September 20, 2018 at 7: 29 AM - Reply
Si guul leh ayaa loo soo iibiyay kaadhka deeqda ee 50 $ p
Miyaga September 27, 2018 at 7: 47 AM - Reply
Waxaan runtii ku faraxsanahay tusahan
karakam Oktoobar 4, 2018 at 7: 59 AM - Reply
Qaar ka mid ah kaararka hadiyado bilaash ah ayaan u helay saaxiibaday tan
Robby Oktoobar 11, 2018 at 8: 16 AM - Reply
Anigu rumaysan maayo
1337 Oktoobar 25, 2018 at 9: 44 AM - Reply
waa wax dhab ah
Babel Nofeembar 15, 2018 at 11: 35 AM - Reply
Babel Nofeembar 22, 2018 at 8: 43 AM - Reply
guys, waxaan ka helay code ka shaqeynta halkan!
Grador Nofeembar 29, 2018 at 10: 58 AM - Reply